Ibida Ibidaan Lolu:Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye. – Kichuu
HomeNewsIbida Ibidaan Lolu:Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye.
Ibida Ibidaan Lolu:Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye.
Ibida Ibidaan Lolu: Qabsoo Bilisummaaf gochaa jirru kana keessatti wareegama guddaa baafnee as geenye.
Damee Boruu, April 19, 2018
Akka barreefama koo guyyaa 4/15/2018,“Duulaa Fuula Lamaa” jedhu jalatti ibsuu yaale maqaa Labsii Yaroo Mudamaan komandi postiin uummata keenyaa irra qubatee bahaa fi gala dowwaa jira. Dubartiin ulfaa utuu hin hafiin hammeenya hiriyyaa hin qabneen uummata keenya irratti rawwatamaa jira. Uummatni keenya ajjeessamaa, hidhamaa fi tumamaa akka jiru eenyu jalaa iyyuu dhokkataa miti. Dararama uummata Oromoo irraa jiru himuuf karaa koo sagalee gahaa tahe argachuu dhabaan jira. Uummatni keenya haala suukaneessaa tahe keessa kufeera.
Karaa biraa ergamtoonni TPLF siif jirra jechaa uummata dogongorsanii akka qabsoon bilisummaa dhaabbatuu olola afuufaa jiru. Kaayyoo fi tooftaa isaanii maal akka the warri hin hubatne dhugaa itti fakkaatee kan jala kaatan jiru. Obbo Lammaa fi Dr. Abiyi kan guddiste asiin gahe TPLF. Sareen abba guddifateef dutti. Warri kun waggaa dhigdamii torba wajjin uummata keenya gidirsaa turan. Har’as ijaarsa EPRDF keessatti qaama tokko tahanii wajjin hojjetu. Maaliif akka isaan isaani irraa eegannaa naaf hin galu. Uummata keenya burjaajeessuuf haasaa damaan makaa OPDOn ofaa jirtu maalitu waraanaa Agaazii irraa adda godha? Kanaafuu waraana Agaazii uummata keenyaa dararaa jiruu humnaan cabsuu fi olola OPDO dura of irraa dhaamsuu qabna.
Dr. Abiyi Mumicha Ministeeraa tahee erga muudamee kaasaa ilmaan Oromoo ajjeefaman hundaaf kan itti gaafatamu mataa isaa akka tahe dagachuu hin qabu. Ajajaa waraana Impaayeera Itoopiyaa tahuuf erga kakate booda badiin waraanni kun uummata irraan gahuuf duraan dursee kan itti gaafatamuu nama ajajaa waraanaa tahe. Obbo Lammaas tahee Dr. Abiyi yaroo ilmaan Oromoo bakka hundatti ajjeefaman akka nama hin agarree fi hin dhageenyee gama ilaalu. Maaliif yoo jenne hojiin TPLF irraa fudhatan Oromoo diiguu fi dhiiksuu malee ijaaruu fi gargaaruu miti.
Dr. Abiyi Mumicha Ministeeraa tahe namni dura dhaqee harka fuudhe Abdii Illee namicha ilmaan oromoo dhibaan lakkawwaman ajjeessee fi uummata miliyyoonaa ol tahu jiruu fi jireenya isaa irraa buqqisuudhaan biyya abbaa isaanii keessatti hirkataa tahanii jirrenya gagadoof akka saaxilaman nama godhe. Uummata Oromoo biyyaa isaa irratti baqataa tahee kan nyaatuu, kan dhugu, kan ufatuu dhabee guyyaa aduun halkan qabanaan waadamuu bira darbee deemee Abdii Illee harka fuudha. Silaa kan gaafatamuu qabu uummata rakkinna irra jiru tahuu hin qaba. Kan uummata kana rakkinaa fi salphinaa kana fakkaatuuf saaxilee shira TPLF waan taheef innis akkuma Dr. Dabteraason Abdii Illeef badhaasa kennuu malee rakkina irraa hin qabu.
Kan qawween nu lolu qawween of irraa ittisuun seera biyya lafaa duratti haqa keenya akka tahe dagachuu hin qabnu. Dhaadannoon haaraan biyyaa Impaayeera Itoopiyaa keessatti bitaa fi mirgaan, duraa fi duubaan “nagaa”ykn”salaam” kan jedhu, warra ammanttiin, bartootaa , hojjetotaan, jaarsaa fi jaartiin buufamaa jira. Uummatni keenya du’aa, qee’ee isaa irraa buqqaa’aa , mana hidhaa keessatti kumaatamaan dararmaa warra nu bitaa jiruuf nagaa laachuu qabna jechuun waan hin fakkanne. Utuu nagaa barbaadanii qabeenya keenya isa uummata keenya saamanii horatan illee fudhatnii nu dhiisanii deemuu danda’u ture. Garuu bara baraan nu garboomsuuf waan akkeeka qabaniif biyya keenya dhiisanii deemaa hin jiran.
Agaaziin shan yaroo uummata Oromoo kuma shanta jeeqaa jirtu ilaaluun ijattu hin tolu. Waan qabnuun kaane Agaazii kana of kaasaa haxxoofne baasuuf humna waan dhabne natti fakkaatu. Rakkinni jiruu walii dirmannee humna keenya qindeefannee yaroo tokkotti itti boba’uu hanqachuutu rakkina tahaa jira. Hojii kana fakkaatu qindeessuu kan danda’u WBO fi QBO waan taheef waan qabnu hundaan isaan gargaaruu fi wajjin dhaabbachuun dirqama keenya. OPDOn akkuma amala ishee uummata keenya qaanesaa jirti. Ololaa fi kijiba ishee kana biraa dabarree tarkaanfachuu qabna. Barri bara afaan mi’eefachuu fi gamnummaan, wal gowwomsanii qabsawwan biraa kutee jira.
ONN:SAGALEE QEERROO EBLA 19 2018
Diraamaa (Tiyaatira) Wayyaanee!